Big City Small World (Series3Episode5- Environmental Issues) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 13, 2013 at 10:57 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series3Episode5- Environmental Issues (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၅) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စ)
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေတင်အငြင်းအခုံဖြစ်နေကြသည်။ အဖွဲ့သည် ဘယ်လောက် စိမ်းလန်းစိုပြေရေးအားပေး သနည်း။
Series3Episode5- Environmental Issues ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
အိုကေ။ ကော်ဖီပဲသောက်မယ်။ နေပါဦး . . . တိုနီဘယ်ရောက်နေလဲ။
အေး သူ့အတွက်ကောင်းတာပေါ့။ သူ့ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု သူအမြဲလိုချင်ခဲ့တာ။ အခုတော့ ဒီဆိုင်နဲ့သူလုပ်ရတော့မယ်ပေါ့။
ကားလို့စ်! ဟေး ကားလို့စ်! ငါ ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်ရမလားသူငယ်ချင်း။
ကားလို့စ်။ ဟယ်လို . . . အင်း သူဟာစားဖိုမှူးကောင်းဖြစ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ရတာပဲ။ စားပွဲထိုးတာကတော့ချာတူးလန်ပဲ။
အင်း အခုဒီမှာအလုပ်အရမ်းရှုပ်နေတယ်။ စိတ်ရှည်စမ်းပါ။
အလုပ်များနေတယ်လား။ အေး ပြောစမ်းပါဦး။ ဒီနေ့နေရာတိုင်းပါပဲ။ ကားရပ်ဖို့နေရာရှာလို့မရဘူး။ ဟိုးတစ်မိုင်လောက်ရပ်ထားခဲ့ရတယ်။
ကားရပ်တယ်။ နင့်ကို နေရာတကာစက်ဘီးနဲ့သွားတယ်လို့ထင်ထားတာ။
အဲ . . . အရင်တုန်းကတော့လုပ်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ကားမောင်းသွားရလွယ်တယ်လေ။ ဟုတ်တယ်မလား။
ငါအပျင်းမကြီးပါဘူး။ ငါအားကစားအတော်များများလုပ်တယ်။ အပတ်တိုင်း ဘောလုံးကန်တယ်။
အမ်. . . အေး. . .ဟုတ်တယ်။
နင်စက်ဘီးကိုပိုခဏခဏသုံးသင့်တယ်။ နင့်အတွက်ကော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ ပိုကောင်းတယ်။
ဟယ်လို။ ဟေး . . . ဟိုဟာ ကောင်တာနောက်က ကာလို့စ်မဟုတ်လား။
ဘုရားရေ . . . အပြင်ကကားတန်းကြီးတွေ့ပြီးပြီလား။
ငါဆိုရင် ဘတ်စ်ကားတို့မြေအောက်ရထားတို့သုံးတယ်။ ဒီလန်ဒန်မှာ ဈေးကြီးတာတောင် သုံးလို့ကောင်းတယ်လေ။
ငါကတော့မနင်းပါဘူး။ ပင်လည်းပင်ပန်းတယ်။ အန္တရာယ်လည်းများသေး။
အဲဒါဟုတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ငါ မြေအောက်ရထားဖြစ်ဖြစ်ဘတ်စ်ကားဖြစ်ဖြစ်စီးတာ။
ကောင်းပြီ . . . နင်တို့အားလုံးကိုယ့်ကျန်းမာရေးနဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်။
အေး အေး အေ ဟုတ်ပါပြီ . . .
ညစ်ညမ်းမှုတွေကိုတားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ လေ့လာနေကြပါတယ်။ အဲဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်ပဲ။
ဟုတ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ငါတို့အားလုံး ကမ္ဘာမြေကိုကယ်တင်ဖို့ကျိုးပမ်းရမယ်။
ဟေ့ ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းတော့မသိဘူး။ အခုလောလောဆယ်တော့ ကားလို့စ်ကိုကူညီပေးသင့်တယ်။
Permalink Reply by swezinlatt009 on August 19, 2013 at 12:41